Kugadziriswa kweInternet e-commerce kwaita makambani mazhinji e hose hoop kukwikwidza kuti akwire ne "kukurumidza chitima" che e-commerce, uye hose hoop vagadziri vanomira kune zvinokanganisa e-commerce nezvakanaka zvavo zvakanakira, saka hose hoop makambani varikugadzira zvirongwa zvepaInternet Panguva ino, zvakafanira kuti varambe vachisimbisa kuvakwa kwenzira dzekunze, kuitira kuti mugadziri wega wega agone kuenderana nekusimudzirwa kwenguva, kuitira kuti mabhizimusi afambire mberi.
Stainless simbi hose machira anogadzirwa nesimbi yepamusoro, uye maitiro ekugadzira aya akanaka. Mushure mekusiya fekitori, vanoiswa pasi yakawandisa kuwongorora. Ivo vakachengeteka uye kuvimbika uye vane yakasimba-kurwisa ngura uye kusimbisa kugona uye yakasimba kwazvo. Iyo yakagadzirwa ine chitarisiko chakanaka, kushanda nyore, yakakwirira yemahara torque uye yakazara torque. Mupendero wehose clamp unotsvedza uye haukuvadze hose. Iko kukwenya kwakapfava uye hose clamp inogona kushandiswazve. Naizvozvo, masimbi esimbi isina hombodo anoshandiswa zvakanyanya kubatanidza pombi dzakaomesesa uye dzakapfava, uye inoshandiswa zvakanyanya mukuwonekera kwemafuta, muputi uye hoses yemagetsi pane akasiyana michina michina yakadai semotokari, matirakita, ngarava, injini dzemafuta, injini dzemagetsi. mafafitera, uye kuvaka kuvaka Iyo dhiza dhizaini, nezvimwewo, ndiyo yekutanga yemhando dzese dzehose kubatana.
Nzira dzinoverengeka dzekuisa hose clamps
Nzira yekuisa yakaringana: Iyo hose clamp inofanirwa kuiswa zvichienderana nechero torque inokurudzirwa nemugadziri.
Nzira isiriyo yekuisa
1. Kunyangwe hose clamp inogona zvakare kupetwa kusvika kune yakakodzera torque kukosha, iyo yekuwedzera inoshanda inoshanda pasi pekumanikidza, izvo zvinoita kuti hose clamp inowira kubva pamucheto wehose uye pakupedzisira inoita kuti hose isvetuke.
2. Kunyangwe hose clamp inogona zvakare kukwiridzwa kusvika panguva yakakodzera, kuwedzera kwehose uye kudedera kwenzvimbo kuchamanikidza hose clamp kuti ifambe, ichikonzera kuti hose irume.
3. Kunyangwe hose clamp inokwanisawo kusimbiswa, kuwedzera, kudhirowa uye kudedera kwenzvimbo yehose kucha kukonzera rusvingo rwehose pasi pemasimba ekucheka, uye zvakare inokuvadza simba rehose. Masango hose anoramba achibvunda uye pakupedzisira anokonzeresa hose kukwiza.